Miisaan Loss Drug Lorcaserin vs Orlistat Daaweynta Cayilnaanta
Isbarbardhig dhammaystiran ee Miisaanka Culayska Lorcaserin vs Orlistat ee Daaweynta Cayilka
Lorcaserin HCL 846589-98-8 Orlistat 96829-58-2
Waa maxay Lorcaserin HCL?
Lorcaserin (belviq) waa serotonin 2C
receptor agonist kaas oo loo isticmaalo daaweynta buurnaanta dadka waaweyn ee leh BMI
(Body mass index) oo ah 30 iyo wixii ka sareeya sida daaweyn dheeraad ah in jimicsiga jirka oo hoos u
Dufanka Orlistat waa dib u rogis lagu beddeli karo ee lipase iyo gaar ahaan si gaar ah, Lipases mindhicirka, oo ay aad u soo jeediso FDA
daaweynta buurnaanta. Budada Orlistat waxaa loo isticmaalaa in lagu caawiyo miisaanka oo yaraada ama loo caawiyo
hoos u dhig halista ah inaad dib u soo ceshato miisaankii hore luntay.
Sidee ayuu u shaqeeyaa Lorcaserin HCL?
Lorcaserin hcl shaqeynta adoo xakameynaya rabitaanka cuntada sida. kaa dhigaya inaad si dhakhso leh u dareento taas oo hoos u dhigeysa xaddiga cuntada aad ku qaadatid adoo adeegsanaya aaladda loo yaqaan 'serotonin receptor' ee loo yaqaan '5-HT2C receptor' oo laga helo gobolka maskaxda ee loo yaqaan 'hypothalamus' kaas oo xakameeya rabitaanka cuntada. Serotonin waa neurotransmitter kaas oo keena dareenka qanacsanaanta iyo dhereg. Soo dhaweeyayaasha Serotonin 2C waxay sidoo kale ku lug leeyihiin sharciyeynta niyadda; inta badan daawooyinka lidka diiqadda waxay ku shaqeeyaan iyada oo la xakameynayo dib-u-soo-celinta serotonin iyo dayactirka maskaxdaada maskaxda ee lagu maydho kiimikada sidaas oo kale waa lorcaserin hydrochloride. Marka, marka la soo gaabiyo lorcaserin waa mid ka mid ah daawooyinka ugu wanaagsan ee xakameynaya cuntada
maxaa yeelay waxay ku shaqaysaa cabudhinta rabitaankaaga.
Sidee loo shaqeeyaa Orlistat?
Budada Orlistat waxay si fudud u shaqaysaa iyada oo ka joojineysa nuugista firfircoon ee dufanka cuntada aan cunno. Orlistat miisaanka oo yaraada Kaniiniyada waxay ku shaqeysaa iyadoo si firfircoon uga joojineysa in ka badan 25% dufanka cunnada in jirka la nuugo waxaana loo isticmaalaa in lagu dhimo miisaanka dadka waaweyn ee jira 18 sano iyo wixii ka weyn. Waa in lagu qaataa baruur yar iyo cunto kaloriin ah oo la dhimay.
Magacyada Calaamadaha Lorcaserin HCL
Magacyada kale ee loo yaqaan 'lorcaserin' waxaa ka mid ah; BELVIQ XR, lorcaserin hcl, lorcaserin
hcl hemihydrate, belviq, Lorcaserin HCL 846589-98-8, lorcaserin hydrochloride,
budada lorcaserin hcl budada.
Magacyada Noocyada Orlistat
Magacyada kale ee magac ee liiska ku jira waxaa ka mid ah Alli, Orlistat Polpharma, Orlistat Farmandina, Orlistat Apotex, O rlistat Aurovitas, Orlistat Stada, Orlistat Serral, Orlistat Amneal, Orlistat HEXAL, Pharex Orlistat, Orlistat-Mepha 120mg, Orlistat Sandoz 120mg,
La Santé, Orlistat EG, Orlistat MK, Orlistat 123ratio, Orlistat Teva, Orlistat Sandoz, Axcel Orlistat, Orlistat Spirig HC 120mg,
Nolosha Half Lorcaserin HCL
Nolosha nuska ah ee daroogo kasta waa qadarka waqtiga loo qaato fiirsashada plasma-ga si loo yareeyo ilaa 50% qiimaheeda asalka ah. The
nus-nolosha for lorcaserin hcl hemihydrate waa 11 saacadood.
Orfil Half Life
Nolosha nuska ah ee Orlistat waa 13.5 saacadood.
Qiyaasta Lorcaserin HCL
Qiyaasta daawada loo yaqaan 'lorcaserin hydrochloride' waa hal 10 mg kiniin ah oo afka laga qaato laba jeer maalintii.
Qiyaasta lagu taliyay ee loogu talagalay BELVIQ XR waa hal kiniin oo 20 mg ah oo afka laga qaato hal jeer maalintii.
Qiyaasta daawada Orlistat ee caadiga ah ee dadka da'doodu tahay 18 sano iyo wixii ka sareeya ee loogu qoro xoog (Xenical [R]) waa 120 mg afka laga qaato seddex jeer maalintii cunn kasta oo waaweyn oo ay ku jiraan dufan.
Qiyaasta caadiga ah ee dawada miyuusigga ee Alli [R] waa 60 mg oo afka laga qaato seddex jeer maalintii cunn kasta oo waaweyn oo ay ku jiraan dufan.
Tayada Sare ee Lorcaserin HCl (BELVIQ) miisaanka oo yaraada CAS: 846589-98-8 waxay ku kacaysaa qiyaastii $ 2-3 / g. Amarka ugu yar waa 10g.
Kiniin kasta oo lorcaserin ah ayaa ku kacaya $ 5.37 (oo ku jira budada 10mg lorcaserin). Waxaad ubaahantahay kudhowaad 60 kaniini si aad udhameyso qiyaasta. Wadarta qiimaha lorcaserin hcl sidaas darteed wuxuu kudarmayaa ilaa $ 322.28.
Tayada ugu sarreysa 99% Saafi ah CAS Lambarka 96829-58-2 waa qiyaastii $ 2 / g.
Kaabsal kasta oo Xenical ah orlistat wuxuu ku kacayaa $ 6.9 illaa $ 8.06 taas oo kuxiran dukaanka ama bogga aad iibsaneyso. Waxaad u baahan doontaa 90 kaabsal oo cabir buuxa ah. Wadarta qiimaha orlistat-ka ayaa ah inta u dhaxaysa $ 621.4 iyo $ 725.48.
Sidee loo isticmaalaa Lorcaserin HCL?
Natiijooyinka ugu wanaagsan, dadka isticmaala waxaa lagu dhiirigelinayaa inay u isticmaalaan lorcaserin hydrochloride oo ay la socdaan cunno caafimaad leh iyo baruurta gubanaysa laylisyada. Waxaad ku qaadan kartaa BELVIQ XR / BELVIQ adigoo wata ama aan haysan cunto. Ku wareeji kiniiniga BELVIQ XR gabi ahaanba hana kala qaybin, burburin, ama calalin.
Sida loo isticmaalo Orlistat?
Tani miisaanka oo yaraada daroogada waa in la qaataa ilaa hal saac cuntada kadib ama waqtiga cuntada Haddii cuntada aysan ku jirin dufan ama la boodo, qiyaasta waa la dhaafi karaa.
Inta lagu guda jiro daaweynta, qofku waa inuu qaataa nafaqo isku dheeli tiran, cunto kaloorku yareeyay oo ay kujirto 30 boqolkiiba kalooriyo dufanka.
Bukaanku waa inuu qaataa kaabis fiitamiin ah oo ay kujiraan fiitamiin dufanka lagu buufiyo inta uu qaadanaayo kaniinadan gubanaysa dufanka. Tani waa sababta oo ah orlistat-ka ayaa ku adkayn kara jirka inuu nuugo fiitamiinno gaar ah markaa waxaad u baahan kartaa inaad qaadato macdanta iyo fitamiin marka aad qaadaneyso dawadan.
Bukaannadu waa inaysan qaadan dawadan waqti isku mid ah dawada loo yaqaan 'multivitamin' caadiga ah. Dhamaan dawooyinka kale waa in loo qaataa si gooni gooni ah.
Mid ka mid ahi waa inuusan qaadan dawadan miisaanka luminta haddii naas nuujin, uur leeyahay, ama uu qabo cudurka malabsorption syndrome.
Immisaad ku waayi kartaa lorcaserin?
Marka loo eego xogta tijaabooyinka caafimaad ee ay u soo gudbiyeen FDA ee soo-saareyaasha daroogada, ku dhawaad ​​50% cunno cunno u isticmaalay daroogada, ayaa lumiyey ugu yaraan 12 rodol celcelis ahaan ama 5 boqolkiiba miisaankooda bilawga.
Waxaa lagu taliyay inaad joojiso isticmaalka daroogada haddii aad ku guuldareysato inaad lumiso 5 boqolkiiba miisaankaaga jirka 12 toddobaad ka dib.
Imisaad ku lumin kartaa orlistat?
Khabiiro caafimaad iyo dhakhaatiir caafimaad ayaa daliil u ah hufnaanta orlistat. Waxaa la cadeeyay in markii si sax ah loo isticmaalo oo lagu daro qaab nololeed caafimaad leh iyo cunno sax ah, Orlistat waxay kaa caawin kartaa inaad lumiso 10 ilaa 20 boqolkiiba miisaankaaga jirka mudo yar oo ah 3-6 bilood.
Waa maxay saamaynaha dhinaca Lorcaserin HCL?
In kasta oo lorcaserin uu faa'iido badan leeyahay, haddana dhibaatooyinka qaarkood ayaa dhici kara. Si kastaba ha noqotee, waxyeelooyinkaan kuma xirna inay dhacaan tusaale ahaan. Waxaa laga yaabaa inay ku dhacaan dadka qaarkood oo ay ku fashilmaan inay ku dhacaan dadka kale. Dhibaatooyinka Lorcaserin hcl waxaa ka mid ah: tabar dari ama daal caadi ah, caano saaid ah ama aan la fileynin oo ka yimaada naasaha, dhuun xanuun, hindhiso, xawaare garaac wadnaha ah ama gaabis ah, gariir, sanka oo dareera, riyooyin xunxun, lallabbo, ciriiriga sanka, codka oo yaraada, gaajo kordhay, madax xanuun, ujeedo badan oo kaadi ah, qandho, wareer, jahwareer, dhidid qabow, qufac, walaac, iyo araga oo xumaada.
Wkoofiyaduhu waa waxyeelada dawooyinka Orlistat?
Waxa weheliya faa iidooyin, orlistat-ka ayaa la imaan kara qaar ka mid ah waxyeelada aan loo baahnayn. Qaar ka mid ah waxyeeladaan ayaa soo bixi kara halka kuwa kalena laga yaabo inay muuqdaan. Si kastaba ha noqotee, haddii saameyntan ay soo baxdo, waxaad u baahan kartaa daryeel caafimaad.
Dhibaatooyinka Orlistat waxaa ka mid ah daciifnimo aan caadi ahayn ama daal, matag, hurdo xumo, dhidid, dhuun xanuun, hindhiso, gariir, sanka oo dareera, lallabbo, sanka oo isku xirma, codka oo yaraada, rabitaanka cuntada oo yaraada, raaxo la'aan, qandho, dhego ciriiri, neefsashada oo dhib ku ah, shuban, qufac, dhaxan, iyo kaadi haysta.
Dib u eegista Lorcaserin HCL
Kadib baaris aan ku sameynay khadka tooska ah si aan u ogaano waa maxay khibrada isticmaale daroogada, waxaan ku faraxsanahay inaan ogaanay in isticmaaleyaal badan ay ku faraxsan yihiin lorcaserin hcl ee daaweynta buurnaanta natiijooyinka. Waa kuwan qaar ka mid ah dib u eegista lorcaserin ee aan la nimid:
Mid ka mid ah isticmaaleyaasha loo yaqaan 'lorcaserin' oo loo yaqaan 'Famwen' ayaa tan lahaa:Haye, waxaan ku jiray Belviq 20mg oo ah XR hal mar maalintii. Waxaan dul saarnaa 3 toddobaad iyo 2 maalmood. Kaliya saameynta aan dareemay, illaa iyo hadda, waa madax xanuun, laakiin waxay noqonayaan kuwa soo noqnoqda. Waxaan si adag ugu dhaqmay borotiinka sare, dufanka yar, 1,500 kalori maalintii, cuntada uu i siiyo dhaqtarkayga nafaqada. Waxaan ka bilaabay 288 lbs hadana waxaan ahay 271. Waxaan ahay 72 jir. Daawadan, kama haysto baahi. Kee, aniga ahaan, waa wax la yaab leh. Xaqiiqdii, mararka qaarkood waa inaan isku qasbaa inaan wax cuno si aanan uga hoos marin 1,000 kalori maalintii. Waxaan diiwaangeliyaa kaloori kasta oo aan cuno, xaashiyaha, iyo tirada ugu hooseysa ee kalooriyada hal maalin waxay ahayd 536 kalori. Sikastaba, waxaan hubaa inaan kugula talin lahaa inaad daroogadaan tijaabiso. ”
Qof kale oo isticmaala Belvic ayaa tan lahaa inuu ka yiraahdo daroogada “Wuxuu ka bilaabmay Belviq bishii Meey 2018 @ 485, waxaan iibsaday cabir, waxaan bilaabay inaan arko dhaqtarka nafaqada leh, waxaanan bilaabay inaan raadsado cuntadayda. Joojiyay cabida dhamaan soodhada iyo casiirka, cunida banaanka, dalbashada, wixii pizza ah, baastada, iwm waxaan bilaabay inaan cabbo biyo kaliya ama maqaar maqaar guriga ku samaysan oo aan sameeyo. Waxaan bilaabay adeegsiga adeegga cuntada ee maxalliga ah ee cunnadayda geeya usbuuciiba. Laga bilaabo maanta waxaan ahay @ 343lb. Qalliin ma leh, ku dhowaad dhammaan caadeysiga cunidda ayaa is beddeleysa, iyo joogitaanka Belviq. ”
Isticmaale kale ayaa tan ka yiri Belviq:Waxaan la halgamay miisaan lumis ka dib qalliinka dhabarka. Waxaan ahaa 177 lbs. Qaaday Belviq muddo 3 bilood ah oo ay la socoto socod ku saabsan socodka 3 mayl maalintii, waxaan lumiyay 40lbs. Waxaan awoodaa inaan culeyska hoos u dhigo anigoo socda maalin kasta iyo inaan wax cuno. Cunitaan xad dhaaf ah ma jiro. ”
Marka loo eego dib -u -eegista lorcaserin hydrochloride, waxay caddaynaysaa in lorcaserin uu si weyn uga shaqeynayo daaweynta buurnaanta iyo maaraynta miisaanka oo yaraada.
Dib u eegista Orlistat
Sidaad ka arki doontid dib-u-eegista orlistat-ka soo socda, isticmaaleyaal badan oo cunno orlistat ah ayaa ku faraxsan natiijooyinka daroogada.
Isticmaalaha Orlistat oo magaciisu yahay Gurlo ayaa tan lahaa inuu ka yiraahdo Xenical (orlistat) Cayilka: "Waxaan ahay dheddig, waxaan bilaabay 99kg/217lbs (waxaan ahay 5'7). Markii hore, waxaan raadinayay hagaajin deg deg ah laakiin dhab ahaan marka ay timaado miisaanka oo yaraada midna ma jiro. Waxaan helay 70lbs afartii sano ee la soo dhaafay ugu dambayntii waxaan ogaaday sida aanan ugu faraxsanayn. 20 maalmood gudahood waxaan lumiyay 14lbs/6kg. Aad baan ugu adkeeyaa cuntadayda, inkasta oo aan si daacad ah u sameeyo ma samayn jimicsigii lagu taliyey. Markaa waxaan qiyaasi karaa inta aan lumi lahaa waqtigaas. Saxarooyinka saliidda leh ee saliidda leh, ma aanan helin shilal aan la xakamayn karin, waxaad ku arki kartaa baaquli musqusha laakiin weli maan helin wax ceeb ah illaa hadda, laakiin waxaan ku hayaa gunnada maalinlaha ah ee lagu taliyey ee dufanka. Waxaan kula talin lahaa Orlistat qof kasta oo u baahan gacan -qabasho, waxaan ogaaday inay runtii iga dhigtay inaan go'aansado inaan sameeyo xulashooyin wanaagsan oo ku saabsan caafimaadkayga iyo miisaankayga. Shaqaalahayga iyo qoyskayga ayaa ogaaday kala duwanaansho jidhkayga ah waxaanan ku dareemi karaa dharkayga markaa runtii waan faraxsanahay. ”
Isticmaal kale oo loo yaqaan magaca Chris ayaa leh kuwan: Markii aan bilaabay qaadashada liistada waxaan ahaa 235lbs waxaana ku jiray 4 toddobaad gudahood, culeyskeyga culeyska wuxuu ahaa illaa 220lbs! 15lbs bil gudaheed !! Xitaa jimicsi ma sameynin, haddaba bal qiyaas intee in leeg oo suurtagal ah haddii aan sameeyo. Hal shay oo taxaddar leh waa daadashada. Waxay sahlaysaa in la daadiyo dufanka liinta markii la kala baxayo, markaa ka taxaddar taas maadaama ay saliid tahay! ”
Isticmaale kale ayaa tan lahaa inuu ka idhaahdo daroogada:Dawadani waa badbaadiye nololeed. Waxaan ahaa ilaa 200 rodol, bishii Janaayo 2019. Maanta waxaan gaarayaa 174. Waxaa intaa dheer waxaan la halgamay calool istaag daran sanado. Hadda waxaan tagayaa hal mar maalintii. Dawadani waa mid cajiib ah. ”
Iibso Lorcaserin HCL
Waad ka sameyn kartaa lorcaserin kaamil ah oo internetka ah haddii aad waqtigaaga u qaadato inaad si fiican u baarto. Had iyo jeer hubso inaad ka iibsaneyso mid la isku halleyn karo oo sharci ah iibiyaha lorcaserin hcl maxaa yeelay noocyada sharci-darrada ah ee daawadan waxay noqon karaan kuwo aad khatar u ah caafimaadka aadna aan aad ugu xun.
Hagaag, waa macquul inaad ku iibsato 60mg liiska ama miisaanka liistada laakiin awooda sare ee liiska guud ama Xenical waxaa kujira 120mg oo liistada ah waxaadna kuheli kartaa oo kaliya warqad dhakhtar. Marka, haddii aad rabto awood sare orlistat 120mg, habka ugu fiican uguna dhib la'aanta waa inaad ka iibsato khadka tooska ah ee alaab-qeybiye sharci ah. Haddii aad raadineyso inaad dalbato orlistatpowder, waxaan kugula talineynaa inaad ka iibsato mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee lagu kalsoonaan karo soosaarayaasha budada ah sida wisepowder.com.
Lorcaserin vs sibutramine
Sidii hore loo sheegay, lorcaserin wuxuu ku kiciyaa dareen qanacsanaanta iyada oo loo marayo firfircoonida soo-saaraha serotonin ee loo yaqaan '5-HT2C receptor' oo laga helo gobolka maskaxda ee loo yaqaan 'hypothalamus'. Dhinaca kale, sibutramine sidoo kale waa cuncun joojiye laakiin wuxuu u dhaqmaa sidii waxqabad celiyaha serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor. Sibutramine waxaa loo tixgeliyaa inay ka badbaado yar tahay marka loo eego lorcaserin sababtoo ah halista sii kordheysa ee istaroogga iyo wadna qabadka.
Lorcaserin vs Orlistat Wixii Daaweynta Cayilka: Midkee ayaa wanaagsan?
Lorcaserin wuxuu u shaqeeyaa sida a xakameyn cunto xumo dabiici ah maxaa yeelay sidaan kor kusoo sheegnay waxay ku shaqeysaa xakamaynta rabitaanka cuntada. Daroogadu dhab ahaan waxay u shaqeysaa iyadoo kaa dhigeysa inaad dareento dhaqso buuxa taas oo yareyneysa qadarka cuntada aad qaadato. Dhinaca kale, habka waxqabadka liistada ayaa ah iyada oo la xakameynayo nuugista firfircoon ee dufanka cuntada aan qaadanno.
Waxaa muhiim ah inaad ogaato inaad ubaahantahay qaadashada fiitamiin dheeri ah oo ay kujiraan fiitamiin dufan leh inta aad qaadanayso orlistat maadama dawada ay kugu adkaynayso jirka inuu nuugo fiitamiino gaar ah. Dhanka kale, uma baahnid kabitaankan oo kale marka aad qaadaneyso cuntada cunida ee loo yaqaan 'lorcaserin' cunto joojinta. Waxaad u baahan doontaa oo keliya inaad ku darto daawada iyo jimicsiga gubanaya ee dufan leh iyo cunno caafimaad leh tanina waa intaas oo dhan. Si kastaba ha noqotee, haddii aadan wax dhibaato ah ku qabin qaadashada fitamiin dheeri ah, kiniiniyada gubashada dufanka ee dufanka leh waxay sidoo kale kuu shaqeyn karaan wax weyn.
Sida ku xusan xogta tijaabooyinka caafimaad ee ay u soo gudbiyeen FDA ee soo saareyaasha daroogada, kuwa cuntada cuna ee isticmaala lorcaserin kaliya ayaa lumiyay qiyaastii 5 boqolkiiba miisaankooda ay bilaabayaan. Dhanka kale, qofku wuxuu lumin karaa ugu badnaan 10-20 boqolkiiba miisaankooda marka la adeegsanaayo orlistat. Laakiin orlistat sidoo kale waa waxyar ka qaalisan marka la barbar dhigo lorcaserin. Hal cabir oo ah lorcaserin hydrochloride waxay ku iibsataa qiime dhan $ 323 halka qiimaha orlistat-ka u dhexeeya $ 621.4 iyo $ 725.48.
Marka waa maxay khadka hoose ee Lorcaserin vs orlistat?
Lorcaserin iyo liistada labaduba waxay umuuqdaan inay ku shaqeynayaan qaab kuleyl ah oo go'aaminta kan ugufiican iyaga dhexdooda si daran waxay kuxirantahay doorashadaada. Si kastaba ha noqotee, haddii sicirka sare iyo isticmaalka fiitamiin dheeri ah aysan dhibaato kugu ahayn adiga, markaa liiska ayaa noqon doona shayga ugu fiican.
Sidee loo doortaa daroogada luminta miisaanka?
Tallaabada ugu horreysa ee lagu dooranayo daroogada miisaan lumista ku habboon waa in la garto oo la fahmo jirkaaga iyo sida ay uga jawaabi karto daawooyinka miisaan lumista kala duwan. Tusaale ahaan, haddii aad ogtahay in xakamaynta rabitaankaaga ay caqabad weyn ku ahayd safarkaaga miisaanka luminta, ka dib waxaad u baahan doontaa inaad u tagto cunnooyinka rabitaanka cuntada sida lorcaserin.
Dhanka kale, haddii aad la kulantay damac waali ah oo ku saabsan cuntada hodanka ku ah dufannada sida shukulaatada iyo cunnooyinka degdega ah, markaa, waxaad u baahan doontaa inaad aado baruurta gubanaysa dawooyinka cuntada sida orlistat. Waxa kale oo aad baari kartaa waxyeelada dawooyinka mid kasta oo aad iska ilaaliso dawada kuu keeni karta waxyeelo badan.
Marka la helo helitaanka dawooyin gubanaya oo dufan oo aamin ah sida orlistat iyo lorcaserin, ma helno wax sabab ah oo qofkasta uu ugu tago qaliinka miisaanka luminta. Ku darista dawooyinkan cuntooyinka gubanaya ee dufanka leh waxay kaa caawin doonaan inaad kuhesho qaab dhismeedka jirka oo aad waligaa rabtid. Kaliya dooro mid ka mid ah daroogada miisaankan luminta oo bilow safarkaaga qaab qaab jir jilicsan oo soo jiidasho leh.
Xarunta Qaranka ee Macluumaadka Bayoloji, Maktabadda Qaranka ee Daawada, Safetyassessment ee FDA-oggolaatay (orlistat iyo lorcaserin) daawooyinka buurnida ka hortagga, buurnida iyo cilmi-nafsiga, Qeybta Cayilka, 462 cj 72-73.
Zhi J, Melia AT, Eggers H, Patel IH (1995). "Dib-u-eegista nuugista nidaamka xaddidan ee orlistat, lipase inhibitor, ee mutadawiciinta aadanaha ee caafimaadka qaba". J Clin Pharmacol. 35 (11): 1103-8.
Spreitzer, Helmut (2010). "Lorcaserin". Österreichische Apothekerzeitung (af Jarmal). 64 (19): 1083.
Peng-Yu, Yang (2009). "Waxqabadka ku-saleysan Wax-ku-oolka ah ee Proteome ee Bartilmaameedyada Cellular ee Orlistat -waxaa Daroogo Lagu Ansixiyay FDA". Wargeyska Bulshada Kiimikada Mareykanka. 132 (2): 656-66.
1.Waa maxay Lorcaserin HCL? / Waa maxay Orlistat?
2.Sidee ayuu u shaqeeyaa Lorcaserin HCL? / Sidee buu u shaqeeyaa Orlistat?
3.Lorcaserin HCL Magacyada Calaamadaha / Orlistat Magacyada Calaamadaha
4.Lorcaserin HCL Nolol Badh / Orlistat Nolol Badh
5.Lorcaserin HCL Qiyaasta / Qiyaasta Orlistat
6.Lorcaserin Price / Orlistat Price
7.How loo isticmaalo Lorcaserin HCL? / Sidee loo isticmaalaa Orlistat?
8. Immisa ayaad ku lumin kartaa lorcaserin? / Immisa ayaad ku lumin kartaa liiska?
9.Waa maxay waxyeelooyinka Lorcaserin HCL? / Waa maxay waxyeelooyinka Orlistat?
10. Dib u eegista Lorcaserin HCL / Dib u eegista Orlistat
11.Lorcaserin vs sibutramine
12.Lorcaserin vs Orlistat Daaweynta Cayilka: Kee baa wanaagsan?
13.Sidee loo doortaa daroogada miisaanka luminta?
Waxkasta oo aad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Nikotinamide Riboside Chloride